एल्यूमीनियम पन्नी कसरी बनाएको छ - NJEFG
एल्यूमीनियम पन्नी कसरी बनाएको छ
एल्यूमीनियम पन्नी छ एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु बाट तैयार जो समावेश बीच 92 र 99 प्रतिशत एल्यूमीनियम। सामान्यतया बीच 0,00017 र 0,0059 इन्च बाक्लो, पन्नी उत्पादन धेरै widths र लागि तागत मा शाब्दिक धेरै कार्यक्रम। यो माइल प्रयोग गरिन्छ लागि थर्मल इन्सुलेशन fabricate गर्न विकास उद्योग, फिन हावा कंडीशनर लागि सूची, ट्रांसफार्मर लागि बिजुली coils, रेडियो र टीवी लागि capacitors लागि इन्सुलेशन भण्डारण ट्यांक, Ornamental उत्पादन, र कन्टेनर र प्याकेजिङ्ग पैकिंग। लागि एल्यूमीनियम पन्नी को लोकप्रियता यति धेरै प्याकेजहरू छ कारणले धेरै आवश्यक लाभ, को को एक प्राथमिक भइरहेको पनि uncooked पदार्थ यसको निर्माण लागि अत्यावश्यक छन् प्रशस्त। एल्यूमीनियम पन्नी छ सस्ती, लामो, चिरस्थायी non- विषाक्त र greaseproof। थप, यो रासायनिक resists आक्रमण र प्रस्ताव शानदार बिजुली र गैर-चुम्बकीय परिरक्षण।
शिपमेन्टहरू (1991 मा) एल्यूमीनियम पन्नी को 913 मिलियन totaled किलो, संग प्याकेजिङ्ग प्रतिनिधित्व seventy- पाँच एल्यूमीनियम को पन्नी को प्रतिशत बजार। एल्यूमीनियम पन्नी गरेको एक प्याकेजिङ्ग रूपमा पहिचान कपडा छ कारण यसको पानी वाष्प र ग्याँसहरु भव्य impermeability। यसलाई पनि तखता विस्तार जीवन, को प्रयोग बनाउँछ थोरै भण्डारण क्षेत्र, र उत्पन्न धेरै भन्दा धेरै कम बर्बाद अन्य प्याकेजिङ्ग सामाग्री। को मा एल्यूमीनियम लागि प्राथमिकता लचिलो प्याकेजिङ्ग छ फलस्वरूप एक हुन आउन वैश्विक घटना। जापान, एल्यूमीनियम पन्नी प्रयोग गरिन्छ किनभने बाधा मा तत्व bendy डिब्बे। युरोप मा, एल्यूमीनियम bendy प्याकेजिङ्ग हावी भएको दबाइ फफोला लागि बजार कार्यक्रम र मीठो wrappers। को रोकनेवाला पेय बक्स, जो उपयोगहरु एक बाधा रूपमा एल्यूमीनियम पन्नी को पातलो पत्र अक्सिजन विरुद्ध, नम्र, र गंध, त्यसै गरी छ एकदम लोकप्रिय गोलो यस क्षेत्र।
एल्यूमीनियम छ अधिकतम हालै को धातु को कि वर्तमान उद्यम मा प्रयोग बनाउँछ विशाल मात्रा। भनिन्छ "अल्युमिना," एल्यूमीनियम यौगिकों प्रयोग गरिन्छ तयार औषधि मा ऐतिहासिक मिश्र र सेट कपडा रंजक यस अवधिको लागि मध्य लामो समय। प्रारम्भिक अठारौँ शताब्दीमा मार्फत वैज्ञानिकहरूले कि आशङ्का ती यौगिकों समावेश एक धातु, र, 1807 मा, अंग्रेजी रसायनविद् महोदय Humphry Davy यो अलग गर्न खोजे। प्रयासमा असफल, Davy तथ्यलाई बावजुद पुष्टि अल्युमिना थियो कि एक इस्पात आधार, जो उहाँले सुरु गर्न जानिन्छ "alumium।" Davy पछि ", एल्यूमीनियम" यो संशोधित र, मा वैज्ञानिकहरूले रूपमा एकै समयमा धेरै जातिका को हिज्जे शब्द "एल्यूमीनियम," अधिकतम अमेरिकी Davy गरेको संशोधित हिज्जे प्रयोग गर्नुहोस्। 1825 मा, एक डेनिस रसायनविद् नाम हंस मसीही Ørsted सफलतापूर्वक पृथक एल्यूमीनियम, र, दुई दशक पछि, एक जर्मन भौतिक नाम फ्रेडरिक Wohler थियो सिर्जना गर्न सक्षम ठूलो को को मलबे धातु; तथापि, Wohler गरेको कणहरु भएको छ तैपनि सरल pinheads को आकार। सन् 1854 हेनरी सैंटे-क्लेयर Deville मा, एक फ्रान्सेली वैज्ञानिक, नाजुक Wohler गरेको प्रविधी रूपमा एल्यूमीनियम गांठ सिर्जना गर्न पर्याप्त पत्थर रूपमा ठूलो छ। Deville गरेको सिस्टम आपूर्ति एक को लागि जग समकालीन एल्यूमीनियम उद्यम र गरे प्राथमिक एल्यूमीनियम बारहरू 1855 मा प्रदर्शित गरिएको थियो पेरिस प्रदर्शनी मा।
यो मा कुरा गर्ने अत्यधिक को मूल्य भर्खरै अलग सेट पत्ता धातु यसको रोकी औद्योगिक उपयोगहरु। तथापि, 1866 मा वैज्ञानिकहरूले काम एक समयमा एउटा मा संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्स साथ विकसित के भयो भनिन्छ हल-Héroult को दृष्टिकोण अक्सिजन देखि अल्युमिना अलग मार्फत लागू एक बिजुली तिक्खर। एकै समयमा रूपमा मा चार्ल्स दुवै हल र पावलले-लुइस-Toussaint Héroult मा, आफ्नो आविष्कारहरू पेटेंट अमेरिका र फ्रान्स क्रमशः, हल बन्न मुख्य पक्रनु भएको आर्थिक आफ्नो शुद्धीकरण को क्षमता विधि। 1888 मा
को बायर शोधन bauxite को प्रक्रिया समावेश4कदम: पाचन, स्पष्टीकरण, वर्षा, र calcination। को अन्त परिणाम एक एल्यूमीनियम ओक्साइड को उत्कृष्ट सेतो पाउडर।
को बायर शोधन bauxite को तरिका समावेश चार कदम: पाचन, व्याख्या, वर्षा, र calcination। को अन्त परिणाम एक एल्यूमीनियम ओक्साइड को गुणस्तर सेतो पाउडर।
उहाँले र धेरै साझेदार को पिट्सबर्ग स्थापित छुट उत्पादित जो संगठन, प्राथमिक एल्यूमीनियम ingots कि वर्ष। गर्न जलविद्युत को उपयोग ऊर्जा एक ठूलो नयाँ रूपान्तरण बोट फल्स नजिकै र को burgeoning भेटी औद्योगिक एल्यूमीनियम लागि मांग, हल गरेको व्यापार एल्यूमिनियम उद्यम-पुन: नामाकरण को संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका (अल्कोआ) 1907-thrived मा। Héroult पछि सेट अप स्विट्जरल्याण्ड मा एल्यूमिनियम-इंडस्ट्री-AKTIEN-GESELLSCHAFT। समर्थन मार्फत वृद्धि एल्यूमीनियम लागि लागि कल अवधिको लागि वैश्विक वार्स म र द्वितीय, सबै भन्दा अन्य औद्योगिक राष्ट्रका बाहिर सुरु आपूर्ति गर्न आफ्नो आफ्नै एल्यूमीनियम। 1903 मा, फ्रान्स भएका छन् पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिका purified एल्यूमीनियमबाट पन्नी आपूर्ति गर्न। संयुक्त राज्य अमेरिका अवलोकन एक दशक पछि यसको पहिलो प्रयोग मेल, नयाँ उत्पादन खुट्टा बैंड हुनुको रेसिंग परेवा पहिचान। एल्यूमीनियम पन्नी बन्न चाँडै लागि प्रयोग पैकिंग कन्टेनर र प्याकेजिङ्ग र विश्व युद्धमा द्वितीय विस्तार यो फैशन, रूपमा एल्यूमीनियम पन्नी सेट अप एक मुख्य प्याकेजिङ्ग भौतिक। सम्म विश्व युद्ध द्वितीय, अल्कोआ बाँकी मात्र अमेरिकी purified एल्यूमीनियम को निर्माता, तथापि यी दिनहरूमा सात हो मुख्य एल्यूमीनियम पन्नी को उत्पादकहरु स्थित मा संयुक्त राज्य अमेरिका।
Nonwoven ग्लास फाइबर र पलिएस्टर फाइबर मा विशेषज्ञहरु
रक ऊन बोर्ड र ग्लास ऊन बोर्ड कस्तो भिन्नता छ?
बाहिरी पर्खाल इन्सुलेशन प्रणाली को निर्माण नियन्त्रण को मुख्य बुँदाहरू
खनिज ऊन बोर्ड र ग्लास ऊन बोर्ड कस्तो भिन्नता छ?
कोलतार, डामर, इन्सुलेशन, र सम्बन्धित मशीनरी को 8 औं प्रदर्शनी
© 2006-2019 नानजिंग EFG कं, लिमिटेड सबै अधिकार सुरक्षित।